छैटौं कोरोना पोजिटिभ : बेल्जियममा छोरी भेटेर बाग्लुङ फर्केकी थिइन्- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
छैटौं कोरोना पोजिटिभ : बेल्जियममा छोरी भेटेर बाग्लुङ फर्केकी थिइन्
पाँचौं र छैटौं संक्रमित बेल्जियमदेखि बाग्लुङसम्म थिए सँगै
चैत्र २०, २०७६ प्रकाश बराल
बागलुङ — चैत ४ गते क्यु आर ६५२ नम्बरको जहाजमा सवार बागलुङकी अर्की महिलामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ भेटिएको छ । बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ३ की उनी ६५ वर्षकी हुन् ।
उनी बेल्जियमबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी थिइन् । विदेशमा रहेका छोरीज्वाइ भेट्न गएकी थिइन् । छोरी ज्वाई भेट्नेक्रममै कान्छो छोरालाई विदेशमा छाडेर उनी फर्केकी थिइन् । उनले दुई साता मात्र विदेशमा बिताएको छिमेकीले बताए ।
बेल्जियमदेखि सँगै उडेका बागलुङकै अर्की संक्रमित (पाँचौं) र उनी एउटै फ्लाइटमा काठमाडौंबाट पोखरा आएका थिए । पोखराबाट पनि एउटै जीपमा बाग्लुङ आएका थिए । युवती र महिलालाई लिन गएका स्थानीय नातेदारको पनि स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको छ ।
फर्केपछि उनले कोरोना भाइरसबारे कुनै चासो राखेकी थिइनन् । उनले विदेशबाट ल्याएको चकलेट छिमेकीलाई बाँडेकी थिइन् । पाँचौ संक्रमितको पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि मात्र उनी क्वारेन्टाइनमा बसेकी हुन् । लकडाउन सुरु भएपछि उनमा ज्वरो र खोकीको लक्षण देखिएको थियो । उक्त लक्षणपछि उनको स्वाब परीक्षणका लागि ल्याइएको थियो । अहिलेसम्म उनी घरमै छिन् । ‘बजार घुम्न त जानु भएन, तर गाउँमा धेरैलाई भेट्नुभयो,’ छिमेकीले भने, ‘हामीलाई पनि थाहा भएन, उहाँले पनि सामान्य दिनचर्या गरिरहनुभएको थियो ।’
उनको घरमा ससुरा, कान्छी बुहारी र दुई नाती छन् । उनको कोरोना पोजेटिभ प्रमाणित भएपछि यो गाउँ नै त्रसित भएको छ । उनीसँग नजिकको व्यवहार गरेकाहरुको खोजी भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक नवराज भट्टले बताए ।
‘तत्कालका लागि धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउने तयारी छ,’ भट्टले भने, ‘त्रसित नहुन तर सचेत बन्न सबैलाई आग्रह गरेका छौं ।’ अस्पताल व्यवस्थापन समिति र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र पोखरेलले अस्पतालमा तत्काल सघन उपचार कक्ष संचालनका लागि माग गरेको बताए ।
‘बिरामीमा जटिल समस्या आयो भने उपचार गर्न समस्या छ,’ पोखरेलले भने, ‘दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था छ तर आईसीयूका उपकरणहरु छैनन् ।’ तत्कालीन जिल्ला अस्पताल बढुवा भएर अञ्चल भएपछि यहाँ बिशेषज्ञ सेवा थपिएको छ । तर सघन उपचारकक्ष भने छैन ।
अस्पतालमा पर्याप्त पीपीई पनि छैन । ‘एकजना संक्रमित देखिने बित्तिकै दर्जनौंलाई परीक्षण गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘पीपीई थपिहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।’ अस्पतालमा यसअघि पोजिटिभ भेटिएकी एक युवती पनि उपचारमा रहेकी छन् । उनको भने स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइरहेको छ । अस्पतालमा हाल दुईवटा मात्र आइसोलेसन कक्ष छ । उक्त कक्ष बढाएर सेवा थप गर्न अस्पताल व्यवस्थापनले तयारी गरेको अध्यक्ष केबी राना मगरले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:३४
एनसेलले घटायो २५ प्रतिशत आधारभूत दर
चैत्र २०, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — एनसेलले बिहीबारदेखि २५ प्रतिशत आधारभूत दर (पे एज यू गो) घटाएको छ । अब लकडाउन अवधिभर एनसेलका ग्राहकले सुलभ दरमा एनसेलको डाटा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
साथै आफ्नो करबाहेक १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिएमबीमा मोबाइल डाटा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
यससँगै ग्राहकले इन्टरनेट चलाउँदै जाँदा ८० प्रतिशतसम्म छुटमा डाटा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले आफ्नो मेन ब्यालेन्स प्रयोग गरी डेटा सेवा चलाउँछन्, खर्च भएको ब्यालेन्स रकमका आधारमा तत्काल बोनस डेटा पाउँदै जानेछन् ।
जब ग्राहकले आफ्नो ब्यालेन्सबाट खर्च गर्दै जान्छन् त्यसै अनुपातमा बोनस डाटा प्राप्त गर्दै जाने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सुरुमा १० रुपैयाँ डाटामा खर्च गरेपछि ग्राहकले २०/२० एमबी डाटा बोनस पाउँछन् । एनसेलले सापटी सेवामा थप रकम, निःशुल्क ब्यालेन्स ट्रान्सफर, रिचार्जमा १२० प्रतिशत बोनस र १५ जीबीको स्टे होम प्याकलगायत सुविधा ल्याएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:२५